Mozambika nanasonia ny fifanaraham-pandriampahalemana fahatelo ao anatin’ny fisarahan-kevitry ny mpanohitra sy ny tsy firaharahian’ny olona · Global Voices teny Malagasy
Misy elatra ao amin'ny RENAMO tsy nanaiky ny fifanarahana
Mpanoratra Alexandre Nhampossa, Dércio Tsandzana Nandika (en) i Liam Anderson, Naomy
Voadika ny 05 Septambra 2019 5:29 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, македонски, Italiano, Français, Português
Fanasoniavana ny fifanarahana, 6 Aogositra 2019 . Pikantsary, video avy amin'ny Televisão de Moçambique
Nosoniavin'ny governemantan'i Mozambika sy ny antoko mpanohitra RENAMO, tamin'ny 6 Aogositra, tao anatin'ny tsy firaharahiam-bahoaka sy ny fisarahan-kevitra ao amin'ny antoko sy ny elatra mitam-piadiana ao aminy, ny Fifanaraham-pampihavanam-pirenena sy ny fandriampahaleman'i Maputo.
Ity no fahatelo amin'ny fifanarahana toy izao hatramin'ny taona 1992 teo amin'ireo antoko mifanandrina, namarana ny 16 taonan'ny ady an-trano teo amin'ny tafiky ny governemanta sy ny hetsika mitam-piadiana RENAMO, izay lasa antoko politika avy eo.
Ny dinam-pandriampahalemana taona 1992 no niantoka ny RENAMO alalana hitazona mpiambina mitam-piadiana hiaro ny mpitarika ny antoko tamin'izany fotoana izany, Afonso Dhlakama.
Tamin'ireo fitaovam-piadiana ireo no niteraka ny herisetra indray tamin'ny taona 2013, izay tsy nifarana raha tsy tamin'ny alalan'ny dinam-pandriampahalemana taona 2014. Avy eo, nanomboka indray ny fifandonana tamin'ny taona 2015, izay nitsahatra tamin'ny fanasoniavana ny fampitsaharana ady taona 2016.
Ireo fipoahana fifandonana ireo dia nateraky ny fitsipahan'ny RENAMO ny valim-pifidianana noho ny fiampangan'ny ny antoko mitondra FRELIMO ho manao hosoka. Efa teo amin'ny fahefana ny FRELIMO hatramin'ny nisian'ny fifidianana nandraisan'ny antoko maro tao Mozambika tamin'ny taona 1992.
Ao anatin'ny fifanarahana taona 2019 no mametraka ireo mpiady anaty akatan'ny RENAMO miisa 5000 hanatitra ny fitaovam-piadiany, ao anatin'ny fiantohana ny filaminana amin'ny fifidianan'ny Papa, voakasa hotontosaina manomboka ny 4 ka hatramin'ny 6 septambra 2019, sy ny fifidianana ankapobeny kasaina hotontosaina amin'ny 15 Oktobra.
Ny fifanarahana dia nosoniavina tao amin'ny Peace Plaza nataon'ny filoha Mozambikana, sady mpitarika ny FRELIMO, Filipe Nyusi, sy ny mpitarika ny RENAMO Ossufo Momade. Ny lanonana dia natrehi-mason'ny filoham-panjakana avy ao Afrika Atsimo, Rwanda, Tanzania, ary Namibia.
“Tianay ny hanamafy ny dianay mankany amin'ny fandriampahalemana tanteraka”, hoy i Nyusi tao amin'ny lanonana, ary nampiany hoe “ity fifanarahana ity no manaporofo fa tsy mila ady intsony izahay”. Nanamafy i Ossufo Momade fa tokony hanamarika ny fanombohan'ny vanim-potoana vaovao ny fampitsaharana ady, entin'ny fifidianana malalaka sy mangarahara ary ny fifandimbiasam-pahefana izany.
Nanolotra 60 tapitrisa euros hanampiana amin'ny fitondrana fandriampahalemana ny Vondrona Eoropeana, voasolotenan'i Federica Mogherini, Solontena Ambony amin'ny Raharaham-bahiny sy ny Politikam-Piarovana.
Mitsipaka ny fifanarahana ny mpiady anaty akata
Tao amin'ny hafatra nivoaka tamin'ny 17 Aogositra, nanambara ny milaza tena ho vaomiera miaramilan'ny RENAMO fa heveriny ho “tsinontsinona” ilay fifanarahana natao vao haingana. Nambara tao anatin'izany ihany koa fa hanaisotra an'i Ossufo Momade tsy ho mpitarika ny RENAMO ny vondrona. Nilaza ny naoty:
A Junta Militar da RENAMO determina e manda publicar oficialmente a partir de hoje a destituição imediata do atual presidente da RENAMO, Ossufo Momade, e anuncia a nulidade de todos os acordos que Momade assinou com o Governo da FRELIMO.
Nanapa-kevitra ary manambara amin'ny fomba ofisialy ny Vaomiera Miaramilan'ny RENAMO fa manomboka androany ny fialan'ny filohan'ny RENAMO amin'izao fotoana izao, Ossufo Momade, ary manambara ihany koa ny tsy mampanankery ny fifanarahana rehetra nifanaovan'i Momade tamin'ny governemantan'ny FRELIMO.
Mandresy lahatra ny vondrona, tarihan'ny Major Jeneraly Mariano Nhongo, fa “miasa ho an'ny FRELIMO” i Ossufo Momade, sady ampangainy ho “manitsakitsaka ny fotokevitry ny dinam-pandriampahalemana” nifanaovana tamin'ny filohan'ny antoko teo aloha Afonso Dhlakama, izay maty tamin'ny 3 May 2018.
João Machava, mpitondratenin'ny vondrona mitam-piadiana RENAMO, no nilaza tamin'ny gazety fa tsy nakan'i Momade hevitra momba ilay fifanarahana ny elatra miaramilan'ny RENAMO.
Tamin'ny hafatra teo aloha nivoaka tamin'ny 3 Aogositra, nampitandrina ihany koa ny vaomiera fa tsy hanolotra ny fitaovam-piadiany mandra-pifidin'ny RENAMO filoha vaovao.
Tsy nampientam-bahoaka loatra
Tsy dia niteraka fientanam-bahoaka loatra izao fifanaraham-pandriampahalemana fahatelo izao, araka ny tatitry ny @Verdade. Tsy nikatona ny fihariana isan-karazany, eny fa na dia metatra vitsivitsy avy eo amin'ny toerana nanaovana ny sonia aza. Tamin'ny fotoana nanatontosana ny lanonana mamarana ny ady an-trano fahatelo, mbola tany am-piasana ny ankamaroan'ny mponin'i Maputo, na voafandrika tao anatin'ny fitohanam-pifamoivoizana tao an-drenivohitra.
Nanoratra ny gazety breziliana Nexo Jornal:
Apesar do carácter histórico que as autoridades se esforçaram para imprimir no momento da assinatura do acordo, a verdade é que, dentro e fora de Moçambique, a notícia foi recebida com um optimismo cauteloso. A desconfiança é explicada pelo fato de esse ser ser o terceiro acordo do tipo firmado no país em quatro décadas. Nas vezes passadas, os acordos, que prometiam trazer uma paz definitiva, estabeleceram apenas tréguas temporárias.
Na dia teo aza ny sary manantantara tian'ny manampahefana naely tamin'ny fotoana nanasoniavana ny fifanarahana, ny marina, na anatiny na ivelan'i Mozambika, noraisina tao anatin'ny fahamailoana izany. Ny tsi-fitokisana moa dia hazavain'ny zavamisy hoe ity no fifanarahana fahatelo amin'ny karazany tao anatin'ny efapolo taona. Teo aloha ny fifanarahana, izay nampanantena fandriampahalemana tanteraka, no nametraka fampitsaharan'ady vetivety monja.
Ora vitsivitsy mialoha ny fifanaovan-tsonia, nisy andian'olona mitam-piadiana nanafika mpandeha bus iray sy kamiao iray tao Nhamapadza, tao afovoan'ny faritanin'i Sofala, nandratra ny mpamily sy ny mpanampy ny iray amin'ireo fiara. Tsy fantatra hoe iza no nanao izany fanafihana izany.